Imibhalo Emisha Yembula Indima Eyimfihlo kaMonsanto e-Illinois Iwebhusayithi Yokubuyekezwa Kwezemfundo kaProfesa Bruce Chassy - Ilungelo Lokwazi I-US
Imibhalo Emisha Yembula Indima Eyimfihlo kaMonsanto e-Illinois Iwebhusayithi Yokubuyekezwa Kwezifundiswa zika-Bruce Chassy
Posted on February 1, 2016 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoMsombuluko, Februwari 1, 2016
Ngemininingwane engaphezulu Xhumana: Carey Gillam (913) 526-6190 noGary Ruskin (415) 944-7350
Iqembu labathengi i-US Right to Know namuhla lifune ukuthi kube sobala okuthuthukile kanye nokudalulwa komphakathi kwemali yezimboni kanye nokuxhumana noprofesa baseyunivesithi yomphakathi.
Ukuxhumana nge-imeyili okutholwe yi-US Right to Know ngokusebenzisa izicelo zombuso we-Freedom of Information Act zikhombisa ukusebenzisana okukhulu phakathi kwe-agronhemical giant giant Monsanto Co kanye nowayengu-University of Illinois isayensi yokudla uSolwazi Bruce Chassy kumaphrojekthi wokukhuthaza izitshalo ze-GMO. Ama-imeyili adalula ukuthi uMonsanto, umqambi ohola phambili wama-GMO, wayenza iminikelo yezimali eyunivesithi ukuze isetshenziswe nguChassy ngesikhathi esifanayo lapho izinkampani ezisebenzisana nobudlelwano bomphakathi neMonsanto zazihlinzeka ngokuqukethwe yi-Chassy pro-GMO kanye / noma ukuhlela izethulo, amaphepha namavidiyo.
Ama-imeyili abuye aveze ukuthi iMonsanto kanye nobudlelwano bomphakathi basize uChassy ukusungula iqembu elingenzi nzuzo kanye newebhusayithi ebizwa Ukubuyekezwa Kwezifundiswa ukugxeka abantu, izinhlangano kanye nabanye abaphakamisa imibuzo ngobungozi bezempilo noma bezemvelo bama-GMO.
Esibonelweni sakamuva, uChassy ubhalise a uchungechunge of izihloko eziphikisa ukuthi ukufakwa ilebuli ye-GMO “inhlekelele yokulinda, ”Futhi ngaphandle kokudalulwa kokusebenzisana kwakhe nomqambi we-GMO uMonsanto.
I-US Right to Know ibiza iCongress ukuthi ifune ukudalulwa kokudla kanye nezinkokhelo zomkhakha wezolimo kumayunivesithi noprofesa, njengoba nje nezinkampani zamakhambi ezemithi nezokwelapha kudingeka ukuthi ziveze izinkokhelo kodokotela nezibhedlela ezifundisayo ngaphansi komthetho i-Physician Payments Sunshine Act.
“Osolwazi akufanele bakwazi ukunxenxa noma ukwenza i-PR ezinkampanini zezolimo ngenkathi bezimela njengabazimele, futhi kufanele badalule noma iyiphi imali abayitholayo kulezo zinkampani,” kusho uGary Ruskin, umqondisi obambisene ne-US Right to Know. "ICongress kufanele inwebe iPhysics Payments Sunshine Act ukuze kudalulwe ukudalulwa kwemali evela ezinkampanini zokudla nezolimo kulowo osolwazi nasemanyuvesi."
Eminye imibhalo etholwe yi-US Right to Know ikhombisa ukusebenzisana okufanayo nezinye izifundiswa zase-US, kufaka phakathi USolwazi Kevin Folta wase-University of Florida. UFolta uthole isibonelelo esingavinjelwe sama- $ 25,000 esivela eMonsanto futhi watshela iMonsanto ukuthibhala noma yini oyithandayo. "
Funda udaba lukaCarey Gillam kuma-imeyili eBruce Chassy, ​​“Ukulandela Umzila We-imeyili: Indlela uProfesa Wenyuvesi Yomphakathi Ahlanganyele Ngayo Emkhankasweni Wenkampani PR. "
I-GMO, Ukukhishwa Kwezindaba, Uphenyo lwethu